Vahiny mpitrandraka ao Sofia Sady manimba tontolo iainana no tsy ara-dalàna
Nitondra fanazavana mikasika ny zava-misy ao amin’ny faritr’i Sofia, indrindra ny momba ireo harena misy ao amin’iny faritra iny tetsy amin’ny Kifa restaurant
Mahamasina omaly ny sekretera jeneralin’ny governora any an-toerana, Tolojanahary Maharavo na Doudou. Tsapa, hoy izy, fa mandringa be ankehitriny ny fitsinjaram-pahefana eto amin’ny firenena. Efa niteny anefa ny filoham-pirenena fa tsy misy fampandrosoana eto raha tsy mipaka any ifotony ny fitsinjaram-pahefana. Ohatra telo no raisina amin’izay dia ny lafiny harena ankibon’ny tany satria tsy misy “direction génerale” mikasika izany any Sofia. Any Mahajanga vao misy sampandraharaha mikasika ny harena ankibon’ny tany. Tsy fantatry ny ao amin’ny faritra ireo mpandraharaha mikasika ny harena ankibon’ny tany ao Mahajanga. Ao daholo ny mpitrandraka tsy ara-dalàna rehetra na “clandestine”. Misy malagasy, misy vahiny. Tsy fantatra intsony ny anjara entin’ireo amin’ny fampandrosoana ny faritra, hoy hatrany ny fanazavany. Misy miteny hoe izahay mandoa hetra kanefa ny olombelona rehetra eto Madagasikara dia mandoa hetra daholo na farany mahantra indrindra aza. Tsy ny fandoavana risitorina mihitsy no hitondra fampandrosoana fa ny ataonao. Toy izany koa ny jono. I Sofia no mpamokatra Kraby voalohany eto. Tapatapahan’ireo mpandraharaha vahiny sy teratany ary ataony tantely afa-drakotra anefa ny Mangrovy fiveloman’ireo biby ireo. Be dia be ny hotely kintana 4 sy 5 misy manodidina ny Baie de Narindra sy Sahamalaza iny. Tsy fantatry ny tomponandraikitry ny faritra akory, hoy hatrany ny tenany. Izany ve no atao hoe fampandrosoana ? Antony nanapahan’ny governoran’ny faritr’I Sofia, Lilyson René de Rolland, sy ny mpiara-miasa aminy hampiantso ny mpandraharaha rehetra eo amin’ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany rehetra ao amin’ny faritr’I Sofia ny 28 febroary izao io, hoy izy, ho tonga any Antsohihy hifampidinika ny fomba vaovao hitantanana ny haren’I Sofia miaraka amin’ny tomponandraikitra avy eo anivon’ny minisitera misahana izany. Tokony ny faritr’I Sofia aloha no hisitraka ny hareny dia avy eo ny mponin’I Madagasikara fa tsy ekena intsony ny gaboraraka sy fanjakan’ny vahiny. Hisy toy izay koa amin’ny martsa ho an’ireo mpitrandraka harena an-dranomasina. ny 2/3n’ny Kraby haondrana eto dia avy ao Sofia kanefa 50 ariary isan-kilao no mba haloan’ireo mpandraharaha mpanondrana. Ny fanapotehana tontolo iainana amin’ny fanapahana Mangrovy koa eo. Vao haingana izao nisy sinoa miisa 2 tratra nikapa Mangrovy 1875 fototra ary efa nosamborina sy nampidirina tao amin’ny fonjan’Analalava.